မသေဆေးနှင့် ကွန်ဆာဗေးတစ်သဂျီး Immortal | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » မသေဆေးနှင့် ကွန်ဆာဗေးတစ်သဂျီး Immortal
မသေဆေးနှင့် ကွန်ဆာဗေးတစ်သဂျီး Immortal
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on Jul 13, 2012 in Aha! Jokes, Satire | 19 comments
သဂျီးမျက်ဝန်းထဲဝယ် နောင်တမျက်ရည်များ ပြည့်လျှံနေဂါ စိတ်အစဉ်ဝယ် လွန်ခဲ့သော နှစ်၁၀ဝခန့်လောက်က ကမာ္ဘလောကကြီးကို မြင်ယောင်တမ်းတနေမိသည်။ မိုးမျှော်အဆောက်အဦးတိုက်တာ၊ ကွန်ပြူတာ၊ လေယဉ်ပျံ သင်္ဘော၊ မော်တော်ကား၊ ပရိဘောဂ၊ အဝတ်အစား အသုံးအဆောင် ဘာသာစကား ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံတို့ဖြင့် ထည်ထည်ဝါဝါ တောက်ပခဲ့သော လူ့ဘုံလောကဂျီး သူ၏ဆင်ခြင်တုံမဲ့မှုကြောင့် ပျက်သုန်းခဲ့ရဗေဗျီ။ ယခုမူ ဗလာနတ္ထိ ဘာဆိုဘာမျှ မကျန်၊ ယုတ်စွအဆုံး ကိုယ်တိုင်ပင် အဝတ်အစားဗလာဖြစ်သည်။ အကြောင်းမူဂါး….
ကမာ္ဘပျက်မည်ဟု ကောလာဟာဠ ပျံ့နှံ့နေသည့် ၂၀၁၂ခုနှစ် ပူပြင်းလှသော နွေရာသီအခါ သမယတခု၌ အမေရိကန်နိုင်ငံ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့သား သိပ်ပန်ပြင်ညာရှင် သဂျီးတယောက် အလုပ်ရှုပ်နေသည်၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း မော်လီကျူး အက်တမ်များကို ကွန်ပြူတာဖြင့် ခွဲစိတ်လေ့လာ၍ အာယုဒီဃ မသေဆေး ဖော်စပ်နေဂျင်းဖြစ်၏။ သဂျီးဂါး သာမညမဟုတ် နိုးဘဲဆုရ ပြင်ညာရှင်ဂျီးဖြစ်သည်။ သူ၏တီထွင်မှုများကြောင့် ထိုအချိန်က လူသားအပေါင်းတို့ နာနိုတက္ကနိုလော်ဂျီ၊ မိုဘိုင်းလ်တက္ကနိုလော်ဂျီ၊ အင်တာနက် တက္ကနိုလော်ဂျီ ပညာရပ်များဖြင့် လေထုထဲရှိ ဓါတ်ရောင်ခြည်လှိုင်းများအသုံးပြုကာ လွယ်ကူပေါ့ပါး မြန်ဆန်သွက်လက်သော ၂၁ရာစု လူနေမှုခေတ်သစ်ကမာ္ဘဂျီး ပေါ်ထွန်းခဲ့ဗေသည်။
ယနေ့မူ လဗောင်းများစွာ အပင်ပန်းခံ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့သော မသေဆေး ဖော်မြူလာ အောင်မြင်လဗျီ။ ထိုဆေးသောက်လိုက်လျင် ထာဝရ အသက်ရှင်မည်ဖြစ်ပီး၊ ကိုယ်တိုင်သော်၎င်း၊ တပါးပယောဂကြောင့်၎င်းသာ သေမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအဆင့်အဖြစ် သူကိုယ်တိုင်ဆေးသောက်ကာ ပထမဆုံး မသေသောလူသားဘွဲ့ ခံယူရင်း ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့သော အနတ္တဝါဒကို ပယ်ချမည်ဖြစ်သည်။ အခြေအနေပေး၍ အများလက်ခံခဲ့လျင် သူ့ကိုယ်သူ ဘုရားအဖြစ် ကြေငြာရန်ရှိသည်။ ထိုသို့ မကြံအပ်မစည်ရာ တွေးခေါ်ပီးသကာလ မသေဆေး သောက်ကာ ဓါတ်ဖန်ပေါင်းချောင်အတွင်း ဝင်ရောက်အိပ်စက်လေသည်။ မနက်မိုးလင်းလာလျင် ကွန်ပြူတာ ဖန်သားပြင်မှတဆင့် ကိုယ်ခန္ဓာမော်လီကျူးများ ပြောင်းလဲနေပုံကို တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကမာ္ဘတလွှားသို့ တရားဝင်ထုတ်ဖော် ကြေငြာရဗေဒေါ့မြည်။
ကမာ္ဘမပျက်ခင် ကောင်းစားနေသော ဇိမ်ဘုံးဂျီးလူထွက် သဂျီးဦးခိုင်
ခူး..ခလော… ဂျီးသတယောက် အိမ်မက်ထဲ၌ နတ်သမီးတဖက်ငါးရာဖြင့် ကိလေသာ သောင်းဂျန်းနေဂျိန်တွင် ဝူး..ဝရော.. အပြင်လောက၌ လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ် မီးတောင်များပေါက်ကွဲကာ ကမာ္ဘဂြိုလ်ဂျီးတခုလုံး ပြိုလဲပျက်ဆီးနေဗေသည်။ အချိန်ကာလအားဖြင့် တညမျှသာ ကြာမြင့်သော်လည်း နှစ်ထောင်ဗောင်းများစွာ တည်ရှိလာခဲ့သော လူသားမျိုးနွယ်စု တခုလုံး ပျက်သုန်းသွားခဲ့ရဗေဗျီ။ ခမ်းနားထည်ဝါလှသော မြို့ပြဂျီးများ၊ အဆောက်အအုံ ရုပ်ဝတ္ထုများ စိုးစဉ်းမျှ မကျန်ဒေါ့။ တရာခံဂါး သိပ်ပန်ပြင်ညာရှင်သဂျီး၏ တီထွင်မှုများကြောင့် လေထုအတွင်း နြူထရွန် ဗူထရွှန် ဂူထရွန်များ ပြိုကွဲကာ လောကဓါတ်တခုလုံး ပေါက်ကွဲထွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ လူ့ဘုံတခုသာ ဒုက္ခရောက်သည်မဟုတ် ကျန်သုံးဆယ်သော ဘုံလောကများလည်း အစီအစဉ်တကျမဟုတ် စောစီးစွာရောက်လာသူများနှင့် ပြည့်နှက်ကာ နေရေးထိုင်ရေး စားသောက်ရေး လွန်စွာကျပ်တည်းလျက် ရှိနေဗေဒေါ့သီ။
ဘုန်းကံကြီးသော သဂျီးဂါးမသေ၊ သူဝင်အိပ်သော ဖန်ပေါင်းချောင်သည် လွန်စွာခိုင်ခံ့သဖြင့် နောက်တနေ့ နံနက်ဝယ် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစွာဖြင့် နိုးထလာဗေသည်။ အတိတ်ဘဝတခုတွင် သံဃာတော်မြတ်တပါး ပျံလွန်တော်မူသည့်အခါ ကောင်းမွန်စွာ မီးပူဇော်ခြင်း၊ အရိုးပြာများအား အုန်းရေဖြင့် ကောင်းစွာဆေးကြော၍ သိမ်းဆည်းပူဇော်ခြင်း ကုသိုလ်အဟုန်တို့ကြောင့် သူ့အား မိုးကြိုးပစ်၊ လှိုင်းလုံးကြီးများ ပုတ်ခတ်သော်လည်း သေကံမရောက် သက်မပျောက် ခဲ့ဗေ။ ဤသီဃား ကမာ္ဘလောက လူ့ဘုံအသစ်တခု ပြန်လည်မွေးဖွားဂျင်း ကနဦး အစဗင်ဖြစ်ပေသီ။
ပျက်ဆီးမှုအရှိန် လွန်စွာကြီးမားရကား ပတ်ဝန်းကျင်လောကတခုလုံး ကမာ္ဘဦးအစကဲ့သို့ သဘာဝအတိုင်းသာ တည်ရှိနေသည်။ အခြားအသက်ရှင်သူ ကျန်လိုကျန်ညား ရှာဖွေသော်လည်း တဦးတယောက် တကောင် တမြီးမျှမတွေ့၊ ကမာ္ဘပျက်စဉ်ညက အဝတ်အစားချွတ် အိပ်ခဲ့သဖြင့် သူကိုယ်တိုင် ကိုယ်လုံးတီးဂျီးဖြစ်နေသည်။ သို့သော် ကံတရားဆိုသည်မှာ ဆန်းကြယ်လွန်းလှသည်။ သဂျီးခမျာ တကိုယ်တည်း မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေစဉ် လသားအရွယ် ဆန့်ကျင်ဖက်လိင် ခလေးနှစ်ဦးအား တွေ့ရှိကာ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ရင်း လူ့လောကဂျီး ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် စီမံစိုင်းပြင်းလေတော့သည်။
ခလေးနှစ်ဦးအား ကြီးပြင်းအောင် ကျွေးမွေးပြုစုရင်း ကုန်လွန်ခဲ့သော အချိန်ကာလက ကမာ္ဘလောကဂျီးနှင့် အရှင်သခင် လူသားမျိုးနွယ်များအကြောင်း သင်ကြားပို့ချပေးရသည်။ လူစဂါးပြောတတ်သူဟူ၍ သူတဦးထဲ ရှိရကား သင်ကြားပို့ချရသည်မှာ မခဲယဉ်းလှဗေ။ ဝေါဟာရ အသစ်များကို တည်ထွင်၏၊ သူ မလိုသူများကို ပုတ်ခတ်ပြောဆို၏၊ ဘာသာဗေဒ အမည်များကို သူပေးချင်ရာပေး၏။ သိပ္ပံပညာ တီထွင်အောင်မြင်ခဲ့မှုများကို အသားပေးပြောဆိုကာ ရုပ်ဝါဒီအား ပြိုင်ဖက်မရှိပို့ချတော့သည်။ ခလေးနှစ်ဦးမှာ နားထောင်နေသော်လည်း တလုံးမျှ နားမလည်ချေ။ လောကဓမ္မတာ ပညတ်အရာဆိုသည်မှာ ဟိုဟာရှိမှ ဒါဖြစ်သည် မဟုတ်ပါလော။ ဟိုဟိုဒီဒီ နှိုင်းတုစရာများမရှိဘဲ ခွေးကြောင်ကြွက်နွား ဒီဗွီဒီ အိုင်ပတ်ဒ် အင်တာနက် ကွန်ပြူတာ မော်တော်ကား မည်မျှ ပြောကြားသော်လည်း အချီးအနှီးသာတည်း။
လက်တွေ့ပြရန်မှာလည်း မည်သည့်ရုပ်ဝထ္ထု အကြွင်းအကျန်မျှ မရှိတော့ဘဲ လောကတခုလုံး စိုစွတ်နေကာ မီးပင်ဖိုမရချေ။ လေထု ဓါတ်သတိ္တကြွလွန်နေ၍သာ အဟာရသိဒ္ဓိပြီးသလို ဖြစ်နေဂျသည်။ ထို့နောက်တွင်ကား လူပေါင်းများစွာ တိုးပွားလာသည်။ ကမာ္ဘဂျီးကား ပြောင်းလဲမှုမရှိ၊ ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံး မှောင်မည်းစိုစွတ်လျက် ရှိသေးသည်။ သဂျီးပြောစဂါးကိုလည်း အရေးမလုပ်ကြတော့ချေ။ သူပြောလေ့ရှိသော အမေရိကန်နိုင်ငံဂျီး၊ လစ်ဘရယ်၊ ကွန်ဆာဗေးတစ်၊ သိပ္ပံ၊ သချာင်္၊ ညုကလီးယားစွမ်းအင်၊ ကွန်ပြူတာ အခြေခံ သုညနှင့်တစ်တို့မှာ ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်ဖြစ်ကုန်သည်။ ပိုဆိုးသည်ကား သူ့အား လူအများက ရှေးရိုးတယူသန် ကွန်ဆာဗေးတစ်ကြီး၊ စိတ်ကူးပေါက်ရာ ပြောသူဂျီးအဖြစ် လှောင်ပြောင်သရော်ဂျင်းများပင်ဖြစ်သည်။
သဂျီးရှေ့တွင် တိုးတိုးတမျိုး ကျယ်ကျယ်တဖုံ “တယ်လီဖုံးဆိုတာဂျီးကနေ ဟိုနဲ့ဒီ စကားလှမ်းပြောလို့ရသဒဲ့၊ အင်တာနက်နဲ့ အကုန်မြင်တွေ့ကြားလို့ရသဒဲ့၊ မော်တော်ကားရှိရင် လမ်းလျောက်စရာလိုဗူးဒဲ့၊ အရက်ဆိုဒါ အသောက်လွန်ရင် မူးဒတ်သတဲ့၊ လူအပြင် ခွေးကြောင် ကြက်ငှက်တွေလည်းရှိသဒဲ့၊ ရွှေ ငွေ ပိုက်ဆံဆိုတာ သိပ်အရေးကြီးသဒဲ့၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်သဒဲ့၊ လစ်ဘရယ်အမြင်ရှိဖို့ လိုသဒဲ့။” သဂျီးခမျာ အများနှင့် တယောက် လှိမ့်ပိမ့်ခံနေရဒေါ့သည်။ ထိုအခါတွင်မှ ပိဋကတ်ကျမ်းလာ အကြောင်းအရာများ၊ ငါးရာ့ငါးဆယ် ဇာတ်နိပါတ်တော်များ၊ ဈာန်သမာဓိ သမထအကျင့်များအား ပျက်ရယ်ပြုခဲ့သည်များကို ပြန်လည်မြင်ယောင်ကာ ကြေကွဲမဆုံးဖြစ်ရတော့သည်။
သဂျီးတယောက် လောကငရဲ အရှင်လတ်လတ် ခံစားနေရချိန်တွင် တုသိသာနတ်ပြည်၌ နတ်သမီးတဖက် ငါးထောင်ဖြင့် နတ်စည်းစိမ်အပြည့် စံစားနေသူကား နတ်မင်းဦးကြောင်ဖြစ်သည်။ နတ်ဒေဝီချုပ်နှစ်ပါးကား လူ့ဘဝဂ ပါရမီဖြည့်ဖက် ပုရှ်နှင့်မိုးစက် တို့ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့နှစ်ဦးကား လူ့ဘဝတွင် ဦးကြောင်အပေါ် အနွံအတာ ခံခဲ့ဂျသလောက် နတ်ဘဝတွင်လည်း လွန်စွာကောင်းဗျံသည်။ ငါကအကြီး သူကအငယ်ဟူ၍ ငြူစူပြိုင်ဆိုင်ဂျင်း အလျင်းမရှိဂျ၊ သဘောထားပြည့်ဝသော သူတော်ကောင်း နတ်မဟေသီများဖြစ်ကြသည်။ ကြေးမုံဂျီးမှာမူဂါး အတိတ်ကံ အနည်းငယ်ပါလာ၍ နတ်သမီးဖြစ်လာခဲ့သော်လည်း နတ်မင်းကြောင်ကြီး၏ရန် ကြောက်၍ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် မနေရဲချေ။ ဂျောင်ကလောင်တွင် တကိုယ်တီး ပုန်းရှိုးကွယ်လျှိုနေရ၏။
တနေ့သ၌ မိုးစက်နှင့်ပုရှ် မဟေသီနှစ်ဦး ပူဆာ၍ မြင့်မိုရ်တောင်တဝိုက် ပျားရည်ဆမ်းခရီး လှည့်လည်သည်တွင် လူ့ဘဝက မိတ်ဆွေဟောင်းအချို့၏ ဖြစ်အင်ကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ရသည်မှာ ပထမဆုံး – အောက်သို့ ဇောက်ထိုးဆင်းလျက်ရှိသော ဘက်ဒံတ ဗျောင်းဗျံဖြစ်သည်။ ကိလေသာနှင့် ဖြစ်ရပ်ကွဲပြားသိသော အရိယာဂျီး ခင်မျာ အသံပင်မထွက်နိုင်ရှာတော့ချေ။ သူ့နောက်တွင်ကား အောက်အော့ခရုဆိုသူဖြစ်သည်။ သူကတော့ စိတ်ကြီး၏၊ အောက်ကျပင် ကျငြားသော်လည်း နှုတ်ကမူ မဟနအဖွဲ့အား ပြစ်တင်ကြိမ်းမောင်းလျက် ရှိသေးသည်။ နောက်ဆုံးသ၌ သဂျီး၏ သနားစဖွယ်ဖြစ်အင် တွေ့ရှိရသည်တွင်မူ ဦးကြောင်တို့ နတ်အိန္ဒြေ မဆောင်နိုင် ရယ်သွမ်းမိဂျသဖြင့် ကောင်းကင်ယံတွင် လျှပ်စီးလျှပ်ပန်းများ ထိန်လင်းဝင်းပ သွားတော့သည်။ လူအများကား ကြောက်လန့်တဂျား ဆောက်တည်ရာမရဖြစ်ကုန်ရာ သဂျီးမှ မိုးလေဝသ ဇလဗေဒသိပ္ပံကို ကိုးကားပြောဆိုတော့သည်။ နတ်မင်းကြောင်ကြီးမှ တောက်ခေါက် သတိပေးသည်တွင် ကျယ်လောင်လှသော မိုးထစ်ချုန်းသံ ထွက်ပေါ်လာတော့မှ သဂျီးတယောက် ပြားပြားဝပ် မြေပေါ်သို့ ရောက်ရှိသွားတော့သည်။
သဂျီးမျက်ဝန်းထဲဝယ် နောင်တမျက်ရည်များ ပြည့်လျှံနေဂါ စိတ်အစဉ်ဝယ် လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်က
သဂျီးတူမနှင့် ဥဥလေးကို မပေးစားလိုက်ရလေချင်းဆိုပီးတော့ ……………
အာဟိဟိ ပြေးဘီနော် ဝှီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
သဂျီး အူးခိုင် တစ်ယောက်
ချုံးချုံးချ ထိုင်ငိုနေတာ့ တယ်တဲ့
မိုးစက်နဲ့ပုရှ် တို့ လာမဖတ်ကြသေးဘူးထင်တယ်…
သကြိုင်ခီးခီး ဆီ ဆေးတောင်းမှဘဲဗျ
ကျုပ်ကတော့.. နတ်သမီးတဖက်ငါးထောင်နဲ့.. ရူးရူးပေါက်ဖို့..အသက်ဝဝရူဖို့.. အချိန်တောင်မရရှာတဲ့.. နတ်မင်းတကောင်ကို… သနားနေမိတာ…
အောက်ကို ဆင်းနေတယ် ဆိုဒေါ့
သဂျီးမင်းတို့ ၃ယောက်ပေါင်း လောင်းကြော်.ဖြစ်မဲ့ အပေါက်ပါလား..
“အဆင့်အနိမ့်ဆုံး လူ ဆိုတာ လယ်လိုဟာလဲဟင်”
“လောဘ ဒေါသတွေစတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့ ရောပြွမ်းနေတဲ့ ပုထုဇဉ်”
“လူမှာ လောဘ ဒေါသ စတဲ့ ကိလေသာတွေ မရှိတော့တဲ့လူပေါ့ ငါ့မြေးရဲ့”
“အဲလိုဆိုရင်.. လောဘ ဒေါသ စတဲ့ ဘပြောတဲ့ ကိလေသာတွေမရှိတဲ့ ကျားကြီးတွေကိုရော ရဟန္တာလို့ပြောလို့ရလားဟင်”
“သူတို့က လူမဟုတ်ဘူးလေ ငါ့မြေးရဲ့”
ကျားက သတ်သတ်လွတ်စားလို့လားခင်ဗျ။ သူကို့ ရန်မူသူဆို အပြုံးလေးနဲ့ကြည့်နေတာလားခင်ဗျ။
ကြောင်ကြီး မင်းတော့ ဂန်ကြီးထိုက်တော့မယ်နော်
ဗျို့ Nut မင်းကြီး ကြောင် ။ တစ်ဘက် Nut သမီး ငါးထောင်ဆိုတော့ Nut မင်းကြီးမှာ ဘယ်နှဘက်ရှိတုန်းဂျ။ တော်တော်များမှာပဲနှော်။ ကျွန်တော့လဲ သုံးလေးယောက်လောက်မျှပါလား။ :-)
နတ်မင်းကြောင်ကြီး ရှူရှူကိုနေရာတကျပေါက်ချိန်မရလို့ သွားရင်းလာရင်းရယ်ရင်းပြုံးရင် တောက်ခေါက်ရင်း ကြုံသလိုပန်းချလိုက်တာ လူ့ပြည်မှာလျှပ်တွေပျက် မိုးကြိုးတွေပစ်ပြီး မိုးတွေ ရွာပါလေရောလား………
ဒီရွာထဲမှာ သဂျီးကြောက်ရမယ့် လူ
အဲ- မှားလို့ ကြောက်ရမှာ ကြောင် (ကြီး) ပဲ ရှိတယ်။ [:D]
ကြောင်သားက စားကောင်းတယ် ပြောတယ် ။ အရေခွံဆုတ် ဆားဆနွင်းနယ် နေလှန်းဆားသိပ်ပြီး မီးကင်လိုက်ရရင် မကောင်းရှိတော့မယ်။
ဒါနဲ့ သူကြီးမွေးစားထားတဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်က ဗိုက်ဗိုက်နဲ့ ဖရဲမ မဟုတ်လားဟင်
ကတ်စေးနဲတဲ့ အဘိုးရီးကို ဘာရို့မွေးစားအဖေတော်ရမှာရဲ
ဘီအီးဖိုး မှန်မှန်ပေးရင် အာကုန်လုံးဂို မွေးစားအဖေ အမေတော်မဟေ့..
နတ်မင်းကြောင်ကြီးမှ တောက်ခေါက် သတိပေးသည်တွင် ကျယ်လောင်လှသော မိုးထစ်ချုန်းသံ ထွက်ပေါ်လာတော့မှ သဂျီးတယောက် ပြားပြားဝပ် မြေပေါ်သို့ ရောက်ရှိသွားတော့သည်။
သူကျသွားတာ ဘယ်မြေပေါ်လဲဟင်။ အနောက်ဖက်လား၊ အရှေ ့ဖက်လား၊ မြေထဲပင်လယ်နားလား။
Rescue Team လွှတ်မလို့ပါ။
နတ်မင်းဂျီး ဆယာကျောင်ဂျီး ခင်ဗျား
တစ်ဖက် ငါးထောင်းသော နတ်သမီးတို့ကို ကြံ့ကြံ့ခံ အံတုနိုင်စွမ်းရှိသော